Shikhar Post » प्रोफाइल
प्रोफाइल Subscribe to प्रोफाइल
राखेप सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल नियुक्त भएका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले आज उनलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेका हुन् । केशवकुमार विष्टको कार्यकाल यही असार ९ गते सकिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । सो पदका लागि निवर्तमान सदस्यसचिव विष्टसँगै दानबहादुर तामाङ, नेपाल तेक्वान्दो युनियनका अध्यक्ष शिव कोइरालालगायत पनि दावेदार थिए ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई तीन दिने अमेरिका भमणमा जाने
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई तीन दिने भमणका लागि अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्री राई बाल्टिमोरमा जुलाई ५, ६ र ७ (असार २०, २१ र २२ गते) मा हुने नेप्लिज एसोसिएसन इन अमेरिकाको नेशनल कन्फरेन्समा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्तान गर्न लागेका हुन् । आगामी असार १६ गते अमेरिकातर्फ गई मुख्यमन्त्री राई २५ गते फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री राईको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा समिटर्स समिट गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णयसमत गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक २०७६, प्रदेश… बाँकी »
माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको नयाँ बजेटः कृषिका लागि नमुना वर्ष घोषणा
पी. खालिङ/शिखरपोष्ट काठमाडौं, १४ असार २०७६ । सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईकाअनुसार केन्द्र सरकारको वित्तीय समानीकरणवापत १० करोड १० लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान ६९ लाख ८४ हजार, प्रदेशको सवारी साधन कर वापत २२ लाख ८४ हजार, केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँड रकमवापत ५ करोड ६३ लाख, पर्यटन रोयल्टीवापत ४४ लाख ८९ हजार ३४९ रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्व संकलनको १० लाख र सर्सत अनुदान रकम १० करोड ५३ लाख गरी जम्मा २७ करोड ७३ लाख ३७ हजार ३४९ रुपैयाँको बजेट गाउँसभाले पारित गरेको छ… बाँकी »
एसईई नतिजा: नायिका करिश्माको ‘बी प्लस’, सांसद शान्ताको ‘बी’
काठमाडौं–गत वर्ष सञ्चालित एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । गत वर्ष चैतमा सञ्चालित एसईईमा सेलिब्रेटी पनि सहभागी थिए जसमध्ये सांसद शान्ता चौधरी र करिश्मा मानन्धर हुन् । विहीवार सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार सांसद चौधरीले बी ग्रेड ल्याएकी छिन् । उनले २.६५ जीपीए ल्याएकी छिन् । यस्तै करिष्मा मानन्धरले बी प्लसले ग्रेड ल्याएकी छिन् । उनले ३ जीपीए ल्याएकी हुन् । यस वर्षको नतिजा अनुसार जीपीए ३.६०–४.०० सम्म ल्याउने कूल १६८८२ परीक्षार्थी रहेका छन् । जसमा छात्रको संख्या ९५९६ रहेको छ भने छात्राको संख्या ७२८६ छात्राको संख्या रहेको छ । त्यसैगरी, जीपए ३.२०–३.६० सम्म ल्याउने कूल ४८९६० विद्यार्थीमा छात्रको संख्या २७२७९… बाँकी »
एनआरएन बेलायतको निर्वाचनमा क्षमता ढकाल
बेलायत । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)बेलायतको आउँदो सेप्टेम्बर १४ मा निर्वाचनमा क्षमता ढकालले महिला संयोजक पदमा उम्मेदवारी दिने भएकी छिन। नेपाली चलचित्र निर्माता लक्ष्मीप्रसाद ढकालकी छोरी क्षमता ढकाल नेपालमा जावलाखेल निवासी हुन् भने हाल लण्डनको साउथ ह्यार्रोमा बस्दै आएकी छन् । विभिन्न देशको भ्रमण गरेकी क्षमता ढकालले यो पटक आफू एनआरएनए एनसीसी यूकेको नेतृत्वमा पुगे या नपुगे पनि राम्रो नेतृत्व ल्याउनका लागी सकृयता देखाउने बताइन। एनआरएनकी अभियंता ढकाल यो नेतृत्वमा पुग्नको लागि साथिभाइ, ईष्टमित्रहरुबाट हौसला प्रदान भइरहेकोेले आफ्नो मनोबल उच्च भएको भनाइ छ। एनआरएनएका पंजीकृत सदस्यहरुले नेपाली समाज र नेपाली समुदायको मर्मलाई ध्यानमा राखी नेतृत्व चयनको समयमा विशेष ध्यान पुरयाउन… बाँकी »
काठमाडौं– नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को आफ्नै भवन तयार भएको छ। विगत तीन वर्षदेखि मासिक एक लाख ३५ हजार भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको संघले नयाँ केन्द्रीय सचिवालयको अत्याधुनिक भवन बनाएको हो। आगामी साउनदेखि नयाँ भवनमा कार्यालय हुने संस्थाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिनेश सिन्दुराकारले जानकारी दिए। सङ्घले पुरानो भवन रहेको १४ आना जग्गामा सरकारी मापदण्डअनुरुप सुविधासम्पन्न भवन बनाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करसहित आठ करोड ८१ लाख १६ हजार रुपैयाँ लागतमा बनेको साढे पाँचतले भवनको भुइँतला र पहिलो तला व्यावसायिक प्रयोजनमा दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिन्दुराकारको भनाइ छ। बैठक हल, लाइब्रेरी, पर्वतारोहण प्रशिक्षक हल, सम्मेलन कक्ष रहने भवन अहिले बनिरहेका समकालीन… बाँकी »
सोलुखुम्बुका सांसद राईको प्रश्न ‘यस्तै पाराले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन कसरी सकिन्छ ?’
काठमाडौं । पर्यटन व्यवयासी आङछिरिङ शेर्पा सम्मानित भएका छन् । फ्रेण्डसिप युथ क्लब सल्लेरी सोलुखुम्बुले शेर्पालाई प्रथम फ्रेण्डसिप युथ क्लब अवार्ड २०७५ को ‘उत्कृष्ठ व्यवसायी’ अवार्डद्धारा सम्मान गरेको हो । शेर्पालाई सोलुखुम्बुका सांसद हेमकुमार राई ‘सुरवीर’ र फ्रेण्डसिप युथ क्लब सोलुखुम्बुका अध्यक्ष महेश किरातीले संयुक्त रुपमा ताम्रापत्र र अवार्ड प्रदान गरी सम्मान गरेका हुन् । शेर्पा लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायीको रुपमा स्थापित सफल व्यवसायी हुन् । उनी खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका ४ खुम्जुङका स्थायी बासिन्दा हुन् । प्रतिनिधीसभाका सांसद हेमकुमार राई ‘सुरवीर’ले सरकारको पर्यटन वर्ष २०२० को आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारुढ दलको सांसद भएपनि राईले खुलेर सरकारको आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका… बाँकी »
पासाङ ल्हामुकी छोरीलाई राजदुत पद
काठमाडौ । राष्ट्रिय बिभुति स्व. पासङ ल्हामु शेर्पालाई बल्ल आएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेतृत्वको सरकारले उच्च न्याय गरेको छ । उनकी सुपुत्री दवा फुटी शेर्पालाई नेपाल सरकारको स्पेन को लागि महामहिम राजदुत जस्तो गरीमय पदमा मनोनयन गरेर उच्च सम्मान गरेको हो । उनी पासङ ल्हामुकी छोरी भएर मात्र हैन योग्यता र क्षमता भएकी नेपाली छोरी हुन् । नेपालको पहिलो सगरमाथाको शिखर चुम्ने नेपाली महिलाको रुपमा स्वर्ण अक्षरले आफ्नो नाम मात्र लेखाईनन् । महिलालेपनि जेपनि गर्न सक्छन् । भन्ने उदाहरण बनिनन् । यसैले उनको सम्मान सारा महिलाहरुको सम्मान हो । उनलाई कार्यकालको सफलताको शुभकामना । पछिल्लो समय उनी आफ्नै… बाँकी »
१७ औं एभरेस्ट म्याराथनको उपाधी सुमन कुलुङ र सुनमाया बुढालाई
शिखरपोष्ट रिपोर्टर खुम्बु, १५ जेठ २०७६ । तेन्जिङ-हिलारी एभरेस्ट म्याराथन १७ औं संस्करणको पुरुषतर्फको उपाधि महाकुलुङका सुमन कुलुङ र महिलातर्फको उपाधि सुनमाया बुढाले जितेका छन् । ६६ औं अन्तराष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा बुधबार भएको प्रतियोगितामा ४२ किलोमिटरको निर्धारित दूरीलाई सुमनले ३ घण्टा ४७ मिनेट १६ सेकेण्डमा पूरा गर्दै उपाधि चुमेका हुन् । महिलातर्फ भने सुनमाया बुढाले ५ घण्टा ३ मिनेट ४ सेकेण्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै उपाधि चुमेका थिए । पुरुषतर्फ रुकुमका कपिलदेव बुढाले निर्धारित ४२ किलोकिटर धुरी ३ घण्टा ५६ मिनेट दुरी पुरा गर्दै द्धितिय भए । त्यस्तै राम कुमार राजभण्डारीले ३ घण्टा ५८ मिनेटमा धुरी पुरा गरि तृतिय स्थान… बाँकी »
विकुमार विक उत्कृष्ठ प्रधानाध्यापकको रुपमा सम्मानित
शिखरपोष्ट रिपोर्टर सोलुखुम्बु, १५ जेठ २०७६ । नाम्चेमा अवस्थ्ति हिमालय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विकुमार विक उत्कृष्ठ प्रधानाध्यापकको रुपमा सम्मानित हुनुभएको छ । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरुमा एक्सन फर नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित साक्षरता सुधार कार्यक्रम २०७५ मा सहभागि प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट विक उत्कृष्ठ हुनुभएको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सोलुखुम्बु जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हेमकुमार राई (सुरबीर), प्रदेश सभा सदस्य बुद्धिकुमारराज भण्डारीलगायतको उपस्थितिबीच खुम्बुमा सम्पन्न भव्य समारोहबीच उक्त सम्मानपत्र प्रदान गरिएको हो । सोलुखुम्बु जिल्ला माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ठूलोढुंगामा जन्मिनुभएको विकले समग्र जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा एक उदाहरणीय… बाँकी »